Shiinaha Customized Running dhexda dhexda, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Bacda dhexda Bacda dhexda > Bacda dhexda oo ordaya
1. Soo bandhigida alaabta ee bacda dhexda socda:
(1) Cabbirkiisa la hagaajin karo wuxuu ku habboon yahay inta badan boorsooyinka dhabarka (dhexda 25-43 inji). Kuwa bilowga ah, tani waa xulasho miisaaniyadeed oo aad u fiican. Waa waara oo waxay leedahay iska caabin cimilo yar, sidaas darteed waxay la qabsan kartaa qubeyska guga. Haddii aad isticmaaleyso dhagaha dhagaha oo si buuxda u xiran, waxaa jira deked ku habboon oo xarigga korontada uu ku dhex mari karo, faahfaahinta milicsiga ahna waxaa laga bixiyaa xagga hore si loo hagaajiyo aagga aragga iftiinka hooseeya.
(2) Ka samaysan dhar jilicsan, oo loogu talagalay inuu kugu raaxeeyo markaad horay u socoto. Miisaan khafiif ah, laadlaadin iyo dhaqsi-qalajin, kuna filan dhammaan waxyaalaha lagama maarmaanka ah, waxaa lagu heli karaa laba midab oo kala duwan oo unisex ah.
(3) Waxay u egtahay wax yar, laakiin uma yara sida magaca loo yaqaan. Waxay u barareysaa sida garka python-ka, oo si raaxo leh ugu habboon taleefan gacmeed weyn, sidoo kale waxay ku haysan kartaa kaararka iyo furayaasha qol gooni ah. Ku habboon tartamada gaagaaban ama orodka, waxaad kaliya qorsheyneysaa inaad waxyaabaha muhiimka ah la socoto.
(4) Suunka ordaya waxaa loogu talagalay inuu sifiican jidhkaaga ula qabsado markaad dhaqaaqayso, waana la ballaadhin karaa si loogu habeeyo inta badan taleefannada casriga ah iyo furayaashaada iyo jelladahaaga. Waxa kale oo jira faahfaahin fiiqan oo ku saabsan agagaarka siibada iyo astaamaha Nike si ay kaaga caawiso inaad nabadgelyo ahaato markaad baabuurka ku wado iftiin hoose.
(5) Waa la balaadhin karaa si loo waafajiyo wax walba, dib uma soo celin doono marka aad socoto, waxaana jira wareegyo ku yaal suunka si aad u isticmaasho. Ragga yar yar, tani waa xulasho wanaagsan maxaa yeelay suunka waxaa lagu hagaajin karaa ku dhowaad dhammaan cabbirka dhexda. Cilladaha kaliya ee jira ayaa ah inay dhib noqon karto inaad taleefanka kala baxdo kalabar adiga oo aan ka tagin fure iyo kaarka bangiga ee gadaashaada.
(6) Jeebkan ordaya wuxuu ka samaysan yahay waxyaabo la xushay, oo ku dhaw jidhka oo raaxo leh.
2. Bacda dhexda oo ordaya product parameters (specifications)
Dhererka 46cm X ballaca 11cm
4. Xirxirida iyo rarka jeebabka socda
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: dherer 46cm X ballac ah 11cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 28cm X 39cm X 40cm. 60PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonaa baakadka boorsadaan baseball-ka ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
Calaamadaha kulul: Bacda dhexda oo socota, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka